China AKWEKWỌ AKWEKWỌ STLỌ ígwè na ndị nrụpụta | Akụkọ
AKW SPKWỌ STLỌ STLỌ ỌR Rol
High Speed ​​Steel Ewepụghị mmanya
High Speed ​​Steel Ibé akwụkwọ
AKWelsKWỌ AKW steKWỌ AKW SPKWỌ AH to ka egosiputa ikike ha iguzogide nro na ogo dị elu ya mere na-ejigide njedebe mbelata mgbe ọnyụ dị arọ ma ọsọ ọsọ dị elu. Ha bụ ndị a kasị alloyed niile nke ngwá ọrụ ígwè ụdị. Ha na-ejikarị tungsten ma ọ bụ molybdenum, chromium, Cobalt na vanadium, tinyere carbon.
Otu abuo di: Molybdenum Types na Tungsten Types
MOLYBDENUM Ngwá ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa nwere 3.50 ka 9.50% molybdenum. Ha nwere njirimara nwere 4.00% tungsten, na 1.00 ruo 5.00% vanadium. Carbon dị elu-0.80 ka 1.50%. Ngwa na-ekpuchi ọtụtụ ngwaọrụ ịcha. Ihe atụ ndị a bụ ihe ndị a: ịkpụgharị ahịhịa, ndị ream, ndị na-egwe ọka, ndị lathe na ndị na-eme ihe eji arụ ọrụ, mma na-egbutu ihe, tinyekwa mma.
AH T nnukwu ọsọ ngwá ọrụ igwe nwere 12.00 ka 20.00% tungsten. Ha nwekwara otutu chromium na vanadium, ufodu nwekwara cobalt buru ibu. Carbon dị elu-0.70 ruo 1.50%, dabere na ọkwa. Ngwá ọrụ eji arụ ọrụ gụnyere bits, drills, reamers, taps, broach, milling cutters, hobs, punches, and die.
Tumadi Elu ọsọ ọsọ ọkwa ọkwa anyị nyere:
HSG6 1.3343 M2 OH51
HSG42 1.3247 M42 OH59
HSG7 1.3348 M7 OH58
100-610MM DIA X1.2-10MM DIC
Nchịkọta dị mma nke nguzogide ejiji, ike na ike ọkụ. Ike compressive ike maka nrụrụ nrụrụ, na-ebelata ikike, denting and onu rollover.
Maka ụdị ụdị ejiji niile na-ebuso agha nke na-ebu vibration, dị ka Lathe ngwaọrụ, Planer ngwaọrụ, Drills, taps, Reamers, Broaches, igwe egbutusị, cutdị egbutusị, Eriri chasers, End igwe, Gear egbutusị
Cobalt gbakwunyere M2 nnukwu ọsọ nchara nke mgbakwunye cobalt na-enye obi ọkụ, Ọfụma ọkụ a ka mma na-eme ka nchara ahụ dabara maka ịhazi ike dị elu na ihe eji arụ ọrụ, akwa alloys siri ike
Ihe na-emegharị agbagharị, mgbata, ihe ndị na-egwe ọka, ndị na-agagharị agagharị, broach, nkwọ osisi, mma, na hobs.
Ngwongwo cobalt di elu nke di elu nke nwere oke ike na ike di elu kariri, nguzogide di nma site na ike nke anakpo ikpo oku di ike, nogide na ike na oru di nkpa na mmeputa ihe di elu.
Maka ihe dị mgbagwoju anya na nke ziri ezi maka ngwa ngwa na ngwa ngwa ọsọ ọsọ, ihe ntụgharị, ọkpọkọ, ndị na-egwe ọka, ndị na-agagharị, broach, nkwọ osisi, mma, na eriri na-anwụ anwụ.
Tungsten based HSS, Ezi nchikota nke ike na ike uhie. Nnukwu iguzogide iyi na nro. Dịtụ mfe kwesie.
Ihe mgbagwoju anya, ihe ndi ozo, ndi na-acho nkpu, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo.
Nke gara aga: ỌR WOR ỌR Oyi
Osote: OLDD ST AKW HOLKWỌ ​​AKWLKWỌ AKW 1.KWỌ AH23 1.2344-H13
High Speed ​​Steel onye nkesa
Elu Ọgba Nchara Egwu
High Speed ​​Steel Supplier
High Speed ​​Steel Tụkwasịnụ
Hss M35 okirikiri hụrụ pupụtara, Hss M2 okirikiri hụrụ pupụtara, Tct okirikiri hụrụ UM UBARA, Hot Work Ngwá Ọrụ Steel gbapụtara Ewepụghị Ogwe, Tct okirikiri Hụrụ Agụba N'ihi Metal, Tct okirikiri Hụrụ Agụba,